शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋणः अहिलेसम्म १३९ ले मात्रै पाए, कस्ता व्यवसाय गर्नेले पाउँछन्? :: कमल नेपाल :: Setopati
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामार्फत् स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइने घोषणा गरेको छ।
यो कार्यक्रम पुरानै प्रकृतिको हो। अहिले ७ लाखसम्म ऋण पाइने सीमालाई बढाएर २५ लाख पुर्‍याइएको मात्रै हो। झट्ट सुन्दा यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय छ, यसले पढेका बेरोजगार युवालाई उद्यमी बन्न मद्दत गर्ने सरकारको दावी छ।
पुरानै कार्यक्रम भएकाले हाल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ, तर सुविधा पाउनेहरू एकदमै कम छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३९ जनाले यस्तो ऋण लिएका छन्। उनीहरूले साढे ६ करोड रुपैयाँ बराबर रकम उपयोग गरेका छन्।
प्रस्ताव लिएर आउनेसँग व्यवसाय कसरी थाल्ने, कच्चा पदार्थ कसरी कहाँबाट ल्याउने, उत्पादन कहाँ कसरी बिक्री गर्ने, उत्पादनको बजार मूल्य कति रहने, अरू उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने/नसक्ने विषय, सम्भावित फाइदालगायतका सम्बन्धमा बैंकहरूले अन्तर्वार्ता नै लिने गर्छन्।
‘अनुभव नभएका उहाँहरूले सामान्य प्रस्ताव ल्याए पनि अन्तर्वार्तामा जवाफ नै दिन सक्नुहुन्न,’ दाहालले भने।
हालसम्म यस्तो ऋण लिनेलाई सरकाले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ। अहिले भने सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजमा यस्तो ऋण दिने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ। अरू ब्याज सरकारले नै अनुदान दिने व्यवस्था हुनेछ।
बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाभन्दा अहिले कायम भएको व्यवस्थामा ऋणीलाई ब्याजमा अझ बढी लाभ मिलेको छ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदलगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्ब न्धी संक्षिप्त प्रस्ताव चाहिन्छ।
सम्बन्धित बैंकले अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएमा ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराइने र लिइसकेको अवस्थामा ऋणीबाट असुल गरिनेछ।
खाद्यान्न, नगदेबाली, तरकारी फलफूल तथा जडिबुटीको उत्पादन तथा व्यवसाय गर्न यस्तो ऋण पाइन्छ।
धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, केराउ, चना, भटमास, चिया, अलैंची, सुपारी, नरिवल, अम्रिसो, कपास, उखु, रबरजस्ता खेतीका लागि ऋण पाइन्छ।
अदुवा, लसुन, बेसार, मरिचजस्ता मसलाको खेती तथा व्यवसाय गर्न यस्तो ऋण पाइन्छ। लसुन, प्याज, काउली, बन्दा, च्याउ, बोडी, सिमी, गाजर, मुला, खुर्सानीलगायत सबै प्रकारका तरकारी खेती गर्न र व्यवसाय गर्न ऋण पाइन्छ।
आँप, सुन्तला, स्याउ, अनार, कागती, भोगटे, अंगुर, केरा, खुर्पानी, अमलाजस्ता हरेक फलफूलको खेती, टिस्युकल्चर, बिउ तथा बेर्ना उत्पादनका लागि ऋण पाइन्छ।
गाई, गोरु, भैंसी, राँगो, बंगुर, खरायो, चौरी, भेडा, बाख्रा, बाच्छाबाच्छी, घोडा, गधा खच्चर, कुखुरा, हाँसजस्ता आर्थिक उपार्जनका लागि पशुपंक्षी पालनका लागि पनि ऋण पाइन्छ। मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशमकिरा पालनका लागि ऋण पाइन्छ।
सिंचाइ तथा सिंचाइ उपकरण खरिद गर्न, थ्रेसर, ग्रिंडर, ट्याक्टर, ट्रेलरजस्ता कृषि औजार वा संयन्त्र खरिद गर्न ऋण पाइन्छ।
अलैंची, चिया, मह प्रशोधन कार्य गर्न, सेरामिक्स, चित्रकला, कागजबाट बनेका सामान, धुप, पुतली, खेलौनालगायत परम्परागत घरेलु कार्यका लागि ऋण पाइन्छ।
स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला, प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र सञ्चालन, शिशु स्याहार केन्द्र र औषधि पसल सञ्चालनका लागि ऋण पाइन्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८, ०३:०३:००
कति पुग्यो दिनार र रिंगिटको भाउ? यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर
एनआइसी एसिया मोबैंकलाई ओम्नीच्यानल एपमा अपग्रेड
५७ अंकले बजार बढ्दा ६ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट